. * . * . ကွယျတစငျး . * . * .: ၂၀၁၀ အိမ်အပြန်
ရေးသားသူ မိုးခါး at 11/06/2010 01:42:00 AM
မြန်မာ ဓလေ့ ထုံးစံလေ ... :))
ဓလေ့ ထုံးစံ ဆိုတာ
မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲ ရှိတာ .. :D
ဂုဏ်ယူစမ်းးဘာာာာ .... B-)
ကံဆိုးတာ နေမှာ။ ကျွန်တော့် တုန်းက ပိုက်ဆံ ပေးတာတောင် အစ်ကို့ကို မုန့်ဖိုးပေးတာ ဟုတ်ပါတယ်နော်လို့ မေးသေးတယ်။ အထွက်က ဘွားတော်ကတော့ ပြန်ယူသွားပါဆိုပြီး ပြန်ပေးလိုက်တယ်။ နည်းလို့လားတော့ မသိ။ :P
အခွန်လည်း မဆောင်ဘူး။ မဆောင်တာ ကြာပြီပေါ့။ ဒီဖောင်တော့ ပါသွားတယ်။
အဝင်မှာ အခွန်ဆောင်တဲ့ စာရွက်ပြရင် ပတ်စ်ပို့ မှာ Leave ဆိုပြီး ရေးပေးလိုက်တယ်။ အရင်တစ်ခါက အဲဒီလို ပြန်တာ။ ပြန်ထွက်တော့ ဒီဖောင် မလိုဘူး။
November 06, 2010 11:39 AM
အကောက်ခွန်မဖြတ်ဘဲ အိမ်ပြန်တဲ့စနစ်ထွင်လို့ရရင်ကောင်းမယ်...စိတ်လက်ချမ်းသားစွာ ဝင်ထွက်လို့ရအောင်
အာဏာရှင်စနစ်ကြီးစိုးနေတဲ့နိုင်ငံမှာ နေရာတကာ
အာဏာပါဝါပြနေတာတော့စနစ်တစ်ခုလိုဖြစ်နေပါပြီလေ။
အဲ့ ဒီ လေဆိပ်ကြီးထဲဝင်လိုက်ရင် လူတိုင်းလဲမွန်းကျပ်ကျပ်ကြီး
ဖြစ်နေရတာလဲကြာပြါပြီ။ ဒါပေမဲ့တစ်ခုတော့ ကောင်းနေသေး
တယ်လေ၊ ဘာပဲဖြစ်ခဲ့ ဖြစ်ခဲ့ဘာမဆိုအကုန်ဖြစ်နိုင်တယ်မဟုတ်လား။
အ၀င်ခက် အထွက်ခက် ဆိုတာကိုများ ပြောနေတာလား sis ရဲ့ :P
ဩဝါဒခံရတာ နဲတဲ့ ကုသိုလ်မှတ်လို့..
November 06, 2010 10:58 PM
ဘာမှစိတ်ညစ်မခံချင်ရင် အမိနိုင်ငံတွင်းမှာပဲ အိမ်မှာ ငုတ်တုတ်ထိုင်နေလိုက်ပေါ့ :)
November 07, 2010 3:58 AM
အမ မိုးခါးရေ....ရောက်လက်စနဲ့ တော့ ဒီမှာပဲ
ဘာတွေ ကြောင်တောင်တောင် လုပ်နေတာလဲတဲ့..
ဒီပေါ်ရောက်လာရင် ဘာတွေလုပ်လာရမယ်ဆိုတာ နားလည်ဘူးလား ဘာညာပေါ့...ပြောတာ ဆိုးလိုက်တာ.ညီမလည်း ဘေးနားမှာ ရှိနေသေးတော့
မြင်နေရတာ စိတ်မချမ်းသာတော့ဘူးးအဲဒါနဲ့ခုပြန်
ဖြည့်လို့ ကော မရနိုင်ဘူးလား။ သူတို့ တွေတကယ်မသိတာလဲဖြစ်နိုင်တယ်လေလို့ ဝင်ပြောမိရင်း နောက်နားက ကောင်တာလေးပြပေးလိုက်တယ်။ အဲဒီ
နားမှာ သွားဖြည့်ချေ..လို့ ပြောပြီး အဲဒီအရာရှိရဲ့
နာမည်လေးကိုတော့ မှတ်ခဲ့သေးရဲ့။ ဒါပေမဲ့လည်း
စိတ်ကလေး ပြန်ငြိမ်သွားတော့ တိုင်မဲ့ အစီအစဉ်ကို
ပြန်ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ့်ကြောင့် ဘယ်သူ့ ကိုမှ
ဒုက္ခ မရောက်စေချင်ဘူး။ အဲလိုမျိုး စကားကြမ်းတွေ
မသုံးမိအောင်ပဲ သင်ခန်းစာ ယူခဲ့ပါတယ်။ :)
အတွေ့အကြုံတွေကို မသိသေးတဲ့ လူတွေအတွက်
ပြန်မျှဝေပေးတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးပါ ညီမ။
ပြန်မဲ့သူတွေ အတွက် ပြင်ဆင်လို့ရတာပေ့ါ။
မိုးခါးရေးတာမြင်တော့ ကိုယ်ကြုံရတာ ပြန်သတိရသွားမိတယ် ... အစ်မ တုန်းက ၁၀ တန်ပါတယ် ပေးခဲ့တယ် ... အခွန်က တစ်နှစ်ကျော်ကျော်စာမဆောင်ရသေးတဲ့ အခြေအနေ ... အ၀င် အိုကေတယ် .. ဒီဖောင်လုပ်ဖို့ ကဒ်လေးယူတယ် ... အဲ့ အပြန် မှာ ကွိုင်တာ .... မျက်နှာပေါက်ဆိုးဆိုး နဲ့လူကြီးတစ်ယောက်ရယ် ...မျက်နှာပေါက်သိပ်မဆိုးတဲ့ အမျိုးသမီးရယ် ....အိပ်မပျော်ပဲ ဟောက်နေလိုက်ကြတာ အပြိုင်အဆိုင် .... ကိုယ့်ရစ်တာပဲပြောမယ်ဆိုရင် ကိုယ်မှာလိုတာ အကုန်ပါရဲ့သားနဲ့ ... အခွန်စာရွက်ထပ်ပြခိုင်းတယ် ... အမှန်က အပြန်ဆိုရစ်စရာကို မလိုတာ .... ကိုယ်ကလဲ အမြင်ကပ်တော့ အခွန်စာရွက်က လွယ်တဲ့အိတ်ထဲမှာ ပါရဲ့သားနဲ့ လပ်ဂေ့ခ်ျထဲ ပါသွားပြီးလို့ပြောတော့ .. သူက ပြောတယ် ... ညည်းကို ဒီခရီးစဉ်ဖျက်ပြီး အခွန်ပြန်ဆောင်ခိုင်းလို့ရတယ် နားလည်လားတဲ့ .. အမှန်က ရန်ကုန်မှာ တရားဝင်အခွန်ဆောင်လို့ရတာ သင်္ဘောသားပဲရှိတယ် .... ဒါပေမယ့် ပေကပ်ကပ်ရုပ်နဲ့ပဲ သူပြောတာနားထောင်တယ် .. တပြားမှလဲမပေးဘူး .. ဘာမှလဲမပြဘူး ... နောက်တော့ လက်ချာရိုက်ပြီး ပွစိပွစိနဲ့ တုံးထုပေးလိုက်တယ် ....း)
November 08, 2010 9:59 AM
ကျနော်တို့ xx ရပ်ကွက်ထဲမှာ xxx ဒီလိုပဲရှိတယ်xxx ကျနော်တို့xxx ရပ်ကွက်ထဲမှာ ဒီလိုပဲxxx
November 08, 2010 7:16 PM
အမတုန်းက အခွန်ဆောင်မသွားဘူး၊ ၁၀ပေးတော့ နဲတယ်လို့ပြောတယ်။ အမလည်း ပြန်ညည်းလိုက်တယ်။ လစာရတာ ဘာမှမကျန်ဘူးလို့။ ဒီ့ထက်တော့ ကိုယ်လည်း ပိုမပေးနိုင်ဘူးလေ။ ၁၀တောင် အခွန်ပြေစာမယူသွားနိုင်လို့ ရစ်မှာစိုးလို့ ပေးလိုက်တာ။
အင်း...ဘယ်နေရာနဲ့မတူတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ချစ်တဲ့ရွှေနိုင်ငံဆီကပဲ ရနေတယ်ကွယ်။ တခြားနိုင်သွားရင် နောက်ဆံတင်းစရာ ဘာမှမရှိဘူး။ ကိုယ့်နိုင်ငံကိုယ်ပြန်ရင်သာ....